Dhismaha Taangiga Kaydinta Biyaha ee Indonesia
Waqtiga boostada: 04-21-2020
Maamulaha guud Mr.SUN wuxuu booqan doonaa carwadii 11aad ee qashinka lagu daweeyo wasakhda oo ka dhacda magaalada Jarkarta, Indonesia inta lagu gudajiro bisha 7aad-17-aad. Waxaan rajeyneynaa in asxaabtu fursad u heli doonaan inay Mr. Sun kula kulmaan Jarkata. Hadda haanta cusub ayaa la dhisay, waxaan rajeyneynaa inaan wax badan iska kaashan karno mustaqbalka. Akhri wax dheeraad ah »
Laga soo bilaabo 16-ka ilaa 18-ka, Oktoobar, 2019, bandhigga IFAT, India. Goobta Bandhigga: Hall 1, Xarunta Bandhigga Bombay (BEC), Mumbai, India C38-Shijiazhuang City Zhaoyang Qalabka Co. Ltd Cinwaanka: Bombay, Xarunta Bandhigga (BEC) Off Western Express Highway Goregaon (Bariga), Mumbai 40006 La Xiriir ... Akhri wax dheeraad ah »
Waqtiga boostada: 03-31-2020
Dhawaan mid ka mid ah mashruuceena ku yaal Xuzhou, China -anaerobic digester tank Hight 22.8m, Dia. 6.11m ayaa la kaluumaysi jiray. Akhri wax dheeraad ah »